မျက်လုံး အောက်နား က အဖြူစိ ၊ အဆီဖုလေး တွေကို ကုသ နိုင်မယ့် နည်းလမ်း များ...! - Thadin
HomeHEALTHYမျက်လုံး အောက်နား က အဖြူစိ ၊ အဆီဖုလေး တွေကို ကုသ နိုင်မယ့် နည်းလမ်း များ…!
မျက်လုံး အောက်နား က အဖြူစိ ၊ အဆီဖုလေး တွေကို ကုသ နိုင်မယ့် နည်းလမ်း များ…!
February 6, 2019 Kay Kay HEALTHY Comments Off on မျက်လုံး အောက်နား က အဖြူစိ ၊ အဆီဖုလေး တွေကို ကုသ နိုင်မယ့် နည်းလမ်း များ…!
မျက်လုံး အောက်ဖက်နားမှာ ပေါက်လေ့ရှိတဲ့ ဒီ အဆီဖု ၊ အဖြူစိလေး တွေကို Milia လို့ခေါ်ပြီး သူက အရေပြား ပါးလွှာတဲ့နေရာမျိုးမှာ ပေါက်တတ်ပါတယ် ။
အဲ့ဒါလေးတွေကို သွားပြီး ထိုးဆွညှစ်တဲ့အခါ ပိုပြီးပွားလာနိုင်လို့ သတိပြုဖို့တော့ လိုပါတယ် ။ ဒီလို အဖြူစိ လေးတွေကို ပျောက်ကင်းစေမယ့် အန္တရာယ်ကင်း နည်းလမ်း တွေကို ရှာဖွေပေးလိုက်ပါတယ် ။
ရေနွေးငွေ့ဖြင့် ကုသခြင်း ကြောင့် ပိတ်ဆို့နေတဲ့ ချွေးပေါက် တွေကို ပွင့်စေပြီး ဆဲလ်သေနှင့် အရေပြားပေါ်ရှိ အညစ်အကြေး များကို သန့်စင်စေပါတယ် ။ Milia တွေကို ကုသ ဖို့အတွက်လည်း ထိရောက်တဲ့ နည်းလမ်း တစ်ခုဖြစ်ပါတယ် ။
ဇလုံတစ်ခုထဲသို့ ရေနွေး ထဲပြီး မိမိ အပူခံ နိုင်လောက်တဲ့ အနေအထားမျိုးမှာ ထွက်လာတဲ့ ရေနွေးငွေ့ကို ၁၅မိနစ်ခန့်  မျက်နှာချင်းဆိုင်ပါ ။ ပြီးသွားလျှင်တော့ မျက်နှာ ကို ခပ်ဖွဖွသုတ်ပြီး အစိုဓါတ်ထိမ်း ခရင်မ် တစ်မျိုးမျိုး လိမ်းပေးပါ ။
လူသုံးများတဲ့ နည်းလမ်း လေးကတော့ ရေနွေး ထဲသို့ အဝတ်သန့်တစ်ခုကိုစိမ်ပါ ။ ပြီးနောက် ရေစင်အောင်ညှစ်ပြီး အဖြူဖုလေးများရှိရာပေါ်သို့ မိနစ် အနည်ငယ်ကြာ အုပ်ပေးထားပါ ။
ထိုအတိုင်း ၂ကြိမ် ၃ကြိမ်ခန့် လုပ်ပေးပါ ။ နေ့စဉ် နှစ်ကြော့လုပ်ဆောင်ပေးခြင်းဖြင့် သက်သာလာတာကို မြင်တွေ့ရမှာပါ ။
ဒီနည်းလမ်းလေးမှာတော့ သကြား အပြင် သံပုယိုရည် နှင့် သံလွင်ဆီ အနည်းငယ်ကိုလည်း လိုအပ်ပါတယ် ။ သကြား ၊ သံပုယိုရည် နှင့် သံလွင်ဆီ ကို လက်ဖက်ရည်ဇွန်း ၁ဇွန်းခန့်စီ ထည့်ကာ ရောမွှေပါ ။
နှံ့စပ်သွားလျှင်တော့ အဖြူဖုလေးတွေ ရှိရာနေရာသို့ ညှင်သာစွာ ပွတ်ပြီးလိမ်းပေးရမှာပါ ။ ။ မိနစ် ၂၀ခန့်ကြာသွားလျှင် ရေဆေးပစ်လိုက်ပါ ။ တစ်နေ့တစ်ကြိမ် ပုံမှန်လုပ်ဆောင်ပေးသွားပါ။
ပျားရည် သန့်သန့်ကို ဘာနဲ့မှမရောဘဲ မျက်နှာပေါ် ၁၅ မိနစ်ခန့်ကြာအောင် လိမ်းပေးထားပါ ။ ပြီးသွားလျှင်တော့ ရေနွေးနွေးဖြင့် ဆေးကြောပေးလိုက်ရုံပါပဲ ။
မကျြလုံး အောကျဖကျနားမှာ ပေါကျလရှေိ့တဲ့ ဒီ အဆီဖု ၊ အဖွူစိလေး တှကေို Milia လို့ချေါပွီး သူက အရပွေား ပါးလှာတဲ့နရောမြိုးမှာ ပေါကျတတျပါတယျ ။
အဲ့ဒါလေးတှကေို သှားပွီး ထိုးဆှညှဈတဲ့အခါ ပိုပွီးပှားလာနိုငျလို့ သတိပွုဖို့တော့ လိုပါတယျ ။ ဒီလို အဖွူစိ လေးတှကေို ပြောကျကငျးစမေယျ့ အန်တရာယျကငျး နညျးလမျး တှကေို ရှာဖှပေေးလိုကျပါတယျ ။
ရနှေေးငှဖွေ့ငျ့ ကုသခွငျး ကွောငျ့ ပိတျဆို့နတေဲ့ ခြှေးပေါကျ တှကေို ပှငျ့စပွေီး ဆဲလျသနှေငျ့ အရပွေားပျေါရှိ အညဈျအကွေး မြားကို သနျ့စငျစပေါတယျ ။ Milia တှကေို ကုသ ဖို့အတှကျလညျး ထိရောကျတဲ့ နညျးလမျး တဈခုဖွဈပါတယျ ။
ဇလုံတဈခုထဲသို့ ရနှေေး ထဲပွီး မိမိ အပူခံ နိုငျလောကျတဲ့ အနအေထားမြိုးမှာ ထှကျလာတဲ့ ရနှေေးငှကေို့ ၁၅မိနဈခနျ့မကျြနှာခငျြးဆိုငျပါ ။ ပွီးသှားလြှငျတော့ မကျြနှာ ကို ခပျဖှဖှသုတျပွီး အစိုဓါတျထိမျး ခရငျမျ တဈမြိုးမြိုး လိမျးပေးပါ ။
လူသုံးမြားတဲ့ နညျးလမျး လေးကတော့ ရနှေေး ထဲသို့ အဝတျသနျ့တဈခုကိုစိမျပါ ။ ပွီးနောကျ ရစေငျအောငျညှဈပွီး အဖွူဖုလေးမြားရှိရာပျေါသို့ မိနဈ အနညျငယျကွာ အုပျပေးထားပါ ။
ထိုအတိုငျး ၂ကွိမျ ၃ကွိမျခနျ့ လုပျပေးပါ ။ နစေ့ဉျ နှဈကွော့လုပျဆောငျပေးခွငျးဖွငျ့ သကျသာလာတာကို မွငျတှရေ့မှာပါ ။
ဒီနညျးလမျးလေးမှာတော့ သကွား အပွငျ သံပုယိုရညျ နှငျ့ သံလှငျဆီ အနညျးငယျကိုလညျး လိုအပျပါတယျ ။ သကွား ၊ သံပုယိုရညျ နှငျ့ သံလှငျဆီ ကို လကျဖကျရညျဇှနျး ၁ဇှနျးခနျ့စီ ထညျ့ကာ ရောမှပေါ ။
နှံ့စပျသှားလြှငျတော့ အဖွူဖုလေးတှေ ရှိရာနရောသို့ ညှငျသာစှာ ပှတျပွီးလိမျးပေးရမှာပါ ။ ။ မိနဈ ၂၀ခနျ့ကွာသှားလြှငျ ရဆေေးပဈလိုကျပါ ။ တဈနတေ့ဈကွိမျ ပုံမှနျလုပျဆောငျပေးသှားပါ။
ကလေးမိဘတွေ သတိထားကြပါ ! ” မရှိတာထက် ….. မသိတာကခက်…!
This Month : 33322
This Year : 174779
Total Users : 533804
Total views : 2414544